जन्डिस भनेको के हो ? जन्डिस कसरी शुरु हुन्छ ? भिडियो सहित – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
जन्डिस भनेको के हो ? जन्डिस कसरी शुरु हुन्छ ? भिडियो सहित
काठमाडौं, आँखाको सेतो भाग, हत्केला, अनुहार वा सम्पूर्ण शरीरमा पंहेलो रंग देखिएको अवस्थालाई जन्डिस भनिन्छ l जन्डिस आँफैमा रोग होइन l यो ५० भन्दा धेरै रोगको साझा लक्षण मात्र हो l